Sidee baan ku gubi karaa Muqaal iPhoto ah u gal DVD la iDVD?
Ma waxaad isku dayday in ay u dhoofiyaan aad iPhoto Muqaal in iDVD laakiin waxa ay sii daryaan, qiilqiil kaliya ama ay jirto dhibaato maqal ah ee aad u soo afjarto ka dib markii Upload ah? Waa hagaag, inkasta oo uu sheegay in ay jiraan xadka ah halkii xadaynta slideshow ee ilaa 99 photos, laakiin Apple suurtagashay in ay hesho ee la soo dhaafay xoogaa in. Sidaas, waa hubaal ma ay sabab u tahay tirada photos in aad qabto in horseedeen dhibaatooyinka dhoofinta. Waa maxay sababta aad isku dayin ha u rogo file MOV la QuickTime ka hor la wadaago ama u dhoofiyaan gal iDVD? U hubso in aad la qabsato goobaha ama xal ku QuickTime ka hor inta aadan badalo ama haddii kaleto waxaad ka ogaan doonto xaqiro tayada.
Taasi ma ahan sida nasiib darro sida dadka waawayn kuwa milkiilayaasha cusub iyo ku faani ay kumbiyuutarada OS Libaaxa iyo Mountain Libaaxa Mac in hadda ogaaday iDVD ma aha qayb ka mid ah xirmada iLife ah. Daacadnimadii, xataa haddii aad weli iDVD aad Mac, wax soo saarka ee slideshow ku DVD ee laga yaabo in ay ka soo oolin, kaas oo noqon kara wax laga diiqadoodo ka dib markii dadaal aad u badan iyo saacado ka qaatay isku dayaya inay isku ururiso slideshow weyn. Haddii aad raadineyso weeyna qaar ka mid ah muuqaalada DVD gubashadii aasaasiga ah, waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay ka Wondershare Video Converter Ultimate for Mac . Download version maxkamadda oo ay tijaabiyaan naftaada!
1 waa All geliyaan mar!
Si fudud u jiidi-iyo-hoos u aad slideshow iPhoto ku riday Video Converter Ultimate mar software ah la geliyo. Qorshahaa waxa minimalistic iyo Muuqaal ah Converter video uu yahay mid aad user-friendly xitaa bilowga video tafatirka. Sidaas, ha ka welwelin. Waa wax iska fudud ka badan oo sahlan ka badan iDVD ah.
2 Beddelaan iPhoto in iDVD
Laga soo bilaabo ayeey menu hoose ee barnaamijka, dooro iDVD ka dibna riix on badalo . Just dib u fadhiistaan ​​iyo nasato! Ha Video Converter Ultimate heshiisyo la halkii aad madaxaaga crack in go'aan kaas oo ah qaabka ugu fiican ee file waa socon u iDVD isagoo. Waxaa lagugu soo wargelinayaa doonaa mar diinta la soo gabagabeeyo fariin pop-up aad shaashad.
Fiiro gaar ah : Ka soo fursadaha kale ee diinta laga heli karaa qaabab wax soo saarka oo ay taageerayaan wadaaga goobaha warbaahinta bulshada caanka ah ama loo maqli karo ee qalabka la qaadi karo aad.
3 Guba iPhoto Muqaal gal DVD ah
Sida note ah kuwa milkiilayaasha Mac aan lahayn iDVD oo qayb ka ah xirmada iLife aad, aad ku faraxsanaan lahaa in doorasho DVD gubashada waxaa sidoo kale ka buuxaan-in Converter Video ah Ultimate u laguugu sahlo. Waxaad dooran kartaa template aad jeceshahay iyo shakhsiyeeyo menu si kastaba ha ahaatee aad rabto in ay noqon. On top of in, waxa kale oo aad ku badbaadin karto nuqul ka mid ah slideshow sida file ISO ah.
> Resource > Beddelaan > Sidee Baan dhoofinta iPhoto Muqaal Si iDVD?